Madaxweyne Siilaanyo ma wuxuu sugayaa Inqilaab..?Faallo: SCC(Kalshaale) - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Madaxweyne Siilaanyo ma wuxuu sugayaa Inqilaab..?Faallo: SCC(Kalshaale)
Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamud (Siilaanyo) waa Madaxweynaha Sharciga ah ee Somaliland ilaa wakhtiga Doorasho Xor iyo Xalaal ah oo lagu bedelaa dalka ka qabsoomayso, laakiinse laga soo bilaabo 26-june 2015, waa Madaxweyne ku-meel gaadh ah oo sifo sharci kursiga ku fadhiya. Labadaas aragtiyoodba waa kuwo Dastuuriya oo aanay jirin meel laga dhaafi karaa, haddii aanay dhicin duruufo kale oo xilka lagaga qaadaa, maadaama muddo-xilleedkiisii caadiga ahaa dhamaaday Madaxweynaha.
27-kii Bishii Jully ee sanadkii 2010-ka ayay ahayd markii uu talada waddanka si rasmiya ula wareegay Hogaamiye Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, kaddib markii uu ku guulaystay Doorashadii qabsoontay 26 June ee sanadkaas. Waxay ahayd Doorashadii Isbedel doon ee ugu miisaanka cuslayd ee ka dhacda Mandaqada Taariikhda inta la xasuusto.
Dadka qaar ayaa ku miisaama isbedelkaa, inuu ahaa geddood shacbi oo guulaystay (Kacdoon shacbi). Kuwo kalena waxay aaminsanyihiin in Kacdoonkaasi ahaa mid cadiifadaysnaa oo ay Bulshadu UDUB rida mooyee, aanay ujeedooyin cad oo Xisbiga Kulmiye ay ku doortaan u muuqan. Halka ay hogaamiyeyaashii Xisbigii UDUB ee Isbedelkaasi galaaftayna rumaysanyihiin in Guul-daradii Xisbigoodu kala kulmay Doorashadaas ay ahayd mid ka dhalatay muddo-dhaafkii Doorashada ee xad-beelay. Kaddin ,markii tiraba sadex jeer loo kordhiyay xilka laga soo bilaabo doorashooyinkii April 2003 qabsoontay markay muddadeedu dhamaatay.
“ Dadku waxay ka daaleen Maamulkii Xukuumadda UDUB” ayay aaminsanyihiin Siyaasiyiinta Xisbigii UDUB ka tirsanaa ee dhexdhexaadka ahi. waxaanay ku doodayaan in haddii ay Doorasho qaban lahaayeen markii wakhtigu ka dhamaaday aan Xisbiga Kulmiye haweysteen hogaaminta dalka, kana guulaysan lahaayeen mar kale, laakiin taas bedelkeeda saddex jeer muddo-xilleedka loo kordhiyey, taasina ay sollansiisay guul-daro aannay ka soo waaqsan oo ay xataa hogaamiyeyaashii xisbigaasi qaarkood sumcad ahaan iyo Siyaasad ahaanba ku dhacaan god madow oo aan sallaamo lagaga soo baxo lahayn, kaasoo ka fogeeyey inay Saaxada Siyaasada ku sii jiraan, taasoo ugu danbayntii galaafatay Xisbigii UDUB oo saaxada ka baxay gebi ahaanba. Kaddib markii ay lumiyeen Kalsoonidii Shacbiga intii ay Maamulayeen.
Dhamaan Su’aallaha iyo kuwo kale oo Maanka Bulshada ka dhex guuxaya ayaa muddan in weydiimahooda laga jawaabo, balse faaqidaadooda iyo lafa-guristooda aan lagaga jawaabi Karin Qormo iyo laba toona, inkasta oo wacyiga lagu jiro iyo waaqica inoo muuqda Maantu uu sawir cad ka bixinayo xaqiiqada jirta iyo xaaladaha waddanka ku gedaaman ee la xidhiidha amuurahan aynu kor kaga soo xusnay.
Aan isweydiino sababta uu Madaxweynuhu balanqaadkaas u sameeyay iyo sababta uu u fulin waayay hadiiba uu umadda u beyaamiyey. Waxa xaqiiqa ah inaan Axmed Siilaanyo ka fiirsan balan-qaadka noocaasa ee uu sameeyey intuu xilka hayay, sababtoo ah, hadii uu arrintaas daacad ka ahaa waxa uu la iman lahaa siyaasad iyo Istaraatiijiyad uu kaga dhabbeynayo go’aankaasi, tan iyo markii uu xukunka la wareegay. Taasi waxay iftiiminaysaa in fulin la’aanta Axdigaas uu ku yimi ku talo-gal la’aan aanu wali daliil cad ka bixin, xataa maanta oo ay talo ku uruurtay.
waxaana taas si cad u beyaaminaya Qodobka 107aad ee Dastuurka dalka, Farqadiisa 5aad, kaaso dhigaya sidan: “Haddii ay suurtoobi waydo duruufo la xidhiidha nabadgelyada dartood, in la qabto doorashada Madaxweynaha iyo ku-xigeenka Madaxweynaha marka muddadii xilkoodu dhammaato waxaa golaha guurtida waajib ku ah in ay muddada xilka u kordhiyaan Madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa, iyaga oo tixgelinaya muddada dhibaatada lagaga gudbi karo; doorashaduna ku qabsoomi karto.”
Sidoo kale, Qodobka 60aad ee Dastuurka Dalka, farqadiisa 2-aad, waxay caddeynaysaa inaan “ inaanay Xilka (Shaqada) xeer dejinta la Wareegi karin cid ka baxsan Baarlamaanku”.
Marka laga hadlayo asbaabaha ay ku iman karto muddo kordhinta xilka Madaxweynaha iyo ku-xigeenka go’aanka Golaha Guurtidu sax maaha boqolkiiba Konton (100%), wallow Khilaafka Siyaasiga ah laftiisu, marka Doorashadu Kaabiga timaado iyadoo aan loo diyaar-garoobini, uu qayb ka noqon karo arrimaha nabad-gelyo xumo ee loo cuskanayo dib u dhigista wakhtiga Doorashada, waana sida iminka ay ku dooddayaan Golaha Guurtidu. Taasise maaha inaan qiil u samaynayno go’aankii Guurtida’e Xukuumdda loogu kordhiyey xukunka, waase aragti Dastuur xurmeynteeda leh.
Xildhibaan Cabdiqaadir Indho-indho oo ah Afhayeenka Golaha Guurtidu waxa uu ii sheegay, isagoo qiil u raadinaya go’aankooda, inay dalka ka badbaadinayeen masiibo Siyaasaddeed oo deg deg ah. Markii aan sii waydiiyey nooca ay tahay masiibada siyaasaddeed iyo halkay ka imanayso, waxa uu ku sifeeyey inay Xisbiyada Siyaasaddu fowdo iyo qas waddanka la doonayaan, si taas ay dalka uga badbaadiyaana ay talaabadan qaadeen.
Geesta kalena, Qasriga Madxaxtooyada waxa muuqata inaanay Mashaakilkan Siyaasaddeed wax shido ah ku haynin, xaalkiisuna wuxuu u eegyahay Shidannaaba-Shidan, halkii ay ahayd inuu la yimaado Madaxweynuhu qorshe Siyaasaddeed oo dhinac isugu duwaya qadiyadaha iska soo horjeeda ee ka taagan dib-u-dhaca Doorashooyinka.
Allow Guusha na waafaji annagu garan mayno geddaan u soconeeeeeeeeeeeeeeee.
Gobanimonews Cheif Editor